Isandla samakhofi esandla ngesandla se-alumina cillamic China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Ceramic Grinding Burr > I-Ceramic Conical Burr ye-Coffee grinder > Isandla samakhofi esandla ngesandla se-alumina cillamic
Isandla samakhofi esandla ngesandla se-alumina cillamic
I-Model No.: Standard
I-alumina eyigugu ekhofi grinder inomsebenzi omuhle kakhulu wokugqoka ukugqoka, uye waba ukusetshenziswa okuthandwa kakhulu kumkhiqizi wekhofi. Ngokuvamile, lezi zitshalo ze-ceramic grinding zenziwe ngama-95% aluminium oxide ceramics. Siyakwazi ukuqhubekela phambili kwe-al2o3 ceramic burr eyenziwe ngokwezifiso zezinhlobo ezehlukene zokwenza ikhofi ngesandla.
Siyakwazi ukuhlinzeka ngokukhethwa kombala ohlukile ukuhlangabezana nemfuneko yamakhasimende. Ukuze sihlangabezane nalezi zimfuno ezimakethe, sihlale silungiselela isamba esanele sokufinyelela izidingo zamakhasimende ethu isikhathi esifushane.
I-Ceramic Millstone ye-Coffee Maker
I-Alumina Ceramic Ignitor